Indoda igwetywe iminyaka emihlanu entolongweni ngokusasaza i-COVID eVietnam
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziVuthayo zaseVietnam » Indoda igwetywe iminyaka emihlanu entolongweni ngokusasaza i-COVID eVietnam
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo • Iindaba eziVuthayo zaseVietnam
Indoda eneminyaka engama-28 ubudala yaseVietnam ibeka iminyaka emi-5 entolongweni yokuhamba nokusasaza intsholongwane ye-COVID-19.
Ukophula izithintelo ze-COVID-19 kukhokelela kwisigwebo sexesha elide.
Indoda yaseVietnam eyosulele abantu abasi-8 nge-COVID-19 iya ejele.
Namhlanje, bangaphezu kwe-13,000 abaswelekileyo kunye nama-520,000 e-COVID-19 amatyala eVietnam.
U-Le Van Tri, oneminyaka engama-28 wagwetywa "esasaza izifo ezosulelayo ezinobungozi" kwaye wagwetywa iminyaka emihlanu entolongweni ngokwaphula imithetho elawula ukuvalelwa yedwa nokusasaza usulelo kwabanye.
Ukugwetywa kunye nokugwetywa okukhawulezileyo kwenzeke ngexesha lokuvavanywa kosuku olunye kwiNkundla yaBantu kwiphondo laseVietnam laseCa Mau.
"UTri ubuyele eCa Mau esuka e-Ho Chi Minh City ... kwaye waphula imithetho yeentsuku ezingama-21 zokuvalelwa yedwa," yatsho ingxelo ebhaliweyo yenkundla.
"Abantu abathathu abasulelekileyo, omnye wabo usweleke ngenxa yentsholongwane emva kwenyanga enye yonyango," yongeze yatsho.
Abanye abantu babini bagwetywe iVietnam iinyanga ezili-18 kunye neminyaka emibini yokuxhonywa entolongweni kwizityholo ezifanayo.
Vietnam Ibe lelinye lamabali empumelelo e-coronavirus ehlabathini ngenxa yokuvavanywa kobunzima ekujoliswe kuko, ukulandelwa komnxeba ngobundlongondlongo, ukuthintelwa kwemida eqinileyo, kunye nokuvalelwa okungqongqo. Kodwa amaqela amatsha osulelo ukusukela ekupheleni kuka-Epreli ayonakalisile loo rekhodi.
ICa Mau, iphondo elisemazantsi eVietnam, inike ingxelo kuphela ngamatyala ali-191 kunye nokufa okubini okoko kwaqala ubhubhane, iphantsi kakhulu kunamatyala angama-260,000 kunye nokusweleka kwabantu abayi-10,685 kwilizwe le-coronavirus epicenter, kwisiXeko saseHo Chi Minh.
Iqhutywa kukuguquguquka okungathethekiyo kwe-Delta, amaza e-Vietnam e-Vietnam aqala ngo-Epreli 27. Ngelo xesha, kuphela ngabantu abangama-35 ababhubhileyo nge-COVID-19, ngelixa inani elipheleleyo losulelo lalimi ngaphantsi nje kwama-4,000. Namhlanje, bangaphezu kwe-13,000 abantu abaswelekileyo, ngelixa amanani amatyala engaphezulu kwama-520,000.
Phantse iipesenti ezingama-80 zokufa kunye nesiqingatha sosulelo sele senzekile kwesona sixeko sikhulu Ho Chi Minh City.
Ikhaya labantu abazizigidi ezisithoba, iHo Chi Minh City ibiphantsi kokuvalelwa ngokupheleleyo ukusukela nge-23 ka-Agasti, kubahlali abavunyelwe ukuba bashiye amakhaya abo bayokuthenga ukutya.
Ngokuthintelwa okubekelwe kude kube nge-15 kaSeptemba, iNkulumbuso esandula ukunyulwa uPham Minh Chinh uyalele ukuvavanywa kobunzima kubahlali besixeko kunye namajoni athunyelweyo ukunyanzelisa ukuhlala kwiodolo yasekhaya kunye noncedo lokuhanjiswa kokutya.